Nyochaa Leagoo S8, ọnụ ọgụgụ zuru oke maka naanị ihe karịrị 100 euro | Gam akporosis
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, Nyocha
Otu n'ime ndị rụpụtara Eshia nke na-eme nke ọma nwa oge ugbu a, yana ụfọdụ ngwaọrụ ndị ego ha bara ezigbo uru bụ Leagoo, nke anyị ekwuola na mbụ.
Onye nrụpụta a emeela ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ, nwere ihe karịrị atụmatụ ndị na-atọ ụtọ yana na anyị ga-abanye na akaụntụ ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịmegharị ama anyị. Ana m ekwu banyere Leagoo S8, ọnụ na anyị nyochaa kpamkpam n'isiokwu a.
1 Leagoo S8 nkọwa
2 Ihe eji emeputa ihe
3 Leagoo S8 ihuenyo
4 Leagoo S8 arụmọrụ
5 Leagoo S8 Njikọ
6 Leagoo S8 ese foto
7 Leagoo S8 Nchedo
8 Foto ndị e tinyere Leagoo S8
9 Leagoo S8 foto osisi
Leagoo S8 nkọwa
Ihuenyo 5.7 anụ ọhịa IPS LCD ụdị na 282 dpi HD mkpebi
Nhazi MediaTek MT6750 64-ntakịrị
CPU ARM Cortex-A53 na 1.5GHz
Eserese Mali-T860 MP2 650Mhz
Nchekwa ime 32 GB
Oghere mmeba Ee micro SD ruo 256GB
Akụkụ 153.5 × 70.7 × 8.8 mm
Nche Mkpisiaka mmetụta dị na azụ
Rear igwefoto Ihe mmetụta nke Sony Exmor nke 13 mpx rụpụtara na f / 2.0 tinyere igwefoto mpx 2 mpx
Igwe n'ihu Otu nke 8 mpx na nke ọzọ nke 2 mpx
Netwọk Ekwekọ na 4G LTE - 3G na 2G netwọk
Batrị 2.940 mAh na nkwado ngwa ngwa
A gam akporo Android 7.0 Nougat
Agba Nwa na-acha anụnụ anụnụ
n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Micro USB
Isi okwu igwe Mba
Ahịa 110-120 euro
Leagoo S8 na-enye anyị ọnụ ya na aluminom rụchara, nke mara ezigbo mma ma dị anya site na ala na ọkara dị ala ebe ọtụtụ ọdụ na-eji plastik mee. Aluminom eji ọ bụ magnet maka akara ụkwụ, nke kachasị n'ọtụtụ oge anyị ga-enwe ọnụ nke akara mkpịsị aka, nke ga-amanye anyị iji mkpuchi ahụ, gụnyere na ngwaọrụ ahụ, ka anyị wee ghara iwepụtakwu oge iji hichaa mkpịsị aka ahụ karịa iji ya.
Nsogbu ọzọ nke ngwaọrụ a na-enye anyị bụ na ọ bụkwa ndọta maka adọta ájá, otu akụkụ nke ekwesiri iburu n'uche mgbe ị na-emepụta ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị mkpịsị aka aka, ọ bụ ájá ga-adị mgbe niile na njedebe.
Leagoo S8 ihuenyo
Leagoo S8 na-enye anyị ihe ngosi 5,7 nke anụ ọhịa nwere usoro 18: 9 na nhazi ihuenyo nke 86%. Ogwe nke Sharp rụpụtara na-enye anyị a magburu onwe visibiliti n'ọnọdụ ọ bụla gburugburu ebe obibi, ọbụlagodi na isi iyi nke ìhè dị ka anyanwụ. Mkpebi nke ihuenyo bụ HD, 1440 × 720, ihe karịrị iji kpuchie mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ yana nke na-enyekwa batrị ohere ịdị ogologo oge.
Leagoo S8 arụmọrụ
The Leagoo S8 bụ ọnụ na nke anyị nwere ike igwu egwuregwu na-achọ ụfọdụ ike fọrọ nke nta na-enweghị nsogbu, dị ka Modern ọgụ, Asphalt 8 AirBorne na ndị ọzọ, na m na-ekwu fọrọ nke nta, n'ihi na site n'oge ruo n'oge o yiri ka na ọnụ ahụ kwụgidere na usoro nke na-ebugharị egwuregwu, ọ dịghị mgbe anyị na-egwu egwu, ihe anyị kwesịrị inwe ekele maka, mana ịnwe obere ndidi, ọ bụghị nsogbu dị oke mkpa iburu n'uche.
3 GB nke RAM yana processor 8-core nke Mediatek, mee ngwaọrụ ahụ jiri nwayọ nwayọ nwayọMa n'etiti menu na ịba ụba, oge izizi nke egwuregwu kachasị dị mkpụmkpụ.
Leagoo S8 Njikọ
Nchịkọta a amalitebeghị njikọ USB-C, yabụ mgbe ị na-ebu ya, anyị ga-aga n'ihu na-eji na vetiran soja Micro USB. Banyere njikọ ekweisi, Leagoo S8 na-enye anyị njikọ jaak 3,5 mm, jaak nke amalitela iji n'ọtụtụ n'ime ọdụ ndị ahụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na-eru ahịa, na na mgbe e mesịrị ma ọ bụ karịa n'oge ha ga-emegharị na kpochapu ya na uzo di n’ihu.
Leagoo S8 ese foto
Igwefoto na-abụkarị otu ngalaba na-ekpughe ihe kachasị amasị ndị ọrụ, yana arụmọrụ ọ na-enye anyị. N’echiche a Leagoo S8 nweta ama, ma anyị ga-eburu n'uche mmetụta placebo nke igwefoto abụọ ahụ n'azụ, ebe onye bụ isi na-ese foto dị mma, ebe nke abụọ, nke a kara aka maka ọnọdụ eserese, na-aga n'ihu na-eji okirikiri blur, nke anyị nwere ike ịhazigharị, inwe ọnọdụ isiokwu ma ọ bụ ihe a na-egosipụta mgbe niile n'etiti ya. Ọzọkwa, mkpebi ahụ adịchaghị mma.
Dịka m kwuru, igwefoto azụ nke ọnụ na-enye anyị ezigbo nsonaazụ, ọbụna n'ọnọdụ dị ala, ebe ụfọdụ ọnụ nke otu akara, na-enweghị obere igosi anyị ihe onyonyo. Igwe ọkụ LED abụọ ahụ na-enwu enwu ma ọ bụ ndị mmadụ zuru oke na foto na-enweghị ịbịaru nso na ama. N'ihe banyere ịde foto foto n'abalị, na nke ihe ahụ na-enwupụta nke ọma, ọka na ogo nke foto ahụ dabara adaba maka ọnụahịa nke ọdụ a.
Banyere igwefoto abụọ dị n'ihu, Leagoo, ọzọ dabara n'otu njehie ahụ wee nye anyị igwefoto abụọ, nke bụ isi bụ otu ezigbo ihe dị mma iji wepụta selfies Ọzọkwa dị na a n'ihu flash, ezigbo maka ise foto fọrọ nke nta ka ọchịchịrị na a abụọ onye iji na-ewere Eserese, na-eji otu usoro dị ka n'azụ igwefoto, blur n'akụkụ nke foto na-ahapụ naanị etiti na-edebe onwe anyị maka selfie.
Leagoo S8 Nchedo
Ọzọ, Leagoo bụ ụdị Asia ndị ọzọ na n'ihi nha ihuenyo, kpebiri itinye onye na-agụ akara mkpịsị aka na azụ nke ọnụ, mbenata nke ya na opekempe, ihe na-emetụta arụmọrụ ọ na-enye anyị, ebe ọ bụ na anyị ga-anwale ọtụtụ oge ruo mgbe anyị jisiri ike chọpụta mkpịsị aka anyị.
N'echiche a, Leagoo na-emehie dịka Bluboo na S8, nke ihe mmetụta ahụ dị, nke pụtara na n'ọtụtụ ọnọdụ, ka anyị rụchaa site na itinye PIN nche ma ọ bụ ụkpụrụ iji kpọghee ya ma nwee ike ịnweta ya.
Foto ndị e tinyere Leagoo S8
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị foto dị iche iche ejiri Leagoo S8, ebe ị nwere ike ịlele ihe m kwuru banyere igwefoto, igwefoto na na-enye anyị ezi nnabata maka ọnụahịa ikpeazụ nke ngwaọrụ ahụ na-enye anyị.
Leagoo S8 foto osisi
Nyochaa: Ụlọ Ignatius
Zụrụ ya na Bangood
Igwefoto ihu na azụ
Isi okwu igwe
O nweghi mgbawa NFC
Onye na - agụ akara mkpisiaka pere mpe
Igwe Ọdụdọ maka egwu na ájá
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Review nke Leagoo S8, a zuru ezu ọnụ n'ihi na ihe karịrị 100 euro
Oppo F5 Ntorobịa: versiondị Oppo F5 na-esighi ike bụ nke gọọmentị ugbu a
Samsung malitere imepụta processor Galaxy S9